Bahdii caanka ku ahayd Ciyaaraha fudud oo dalka soo gaartey +sawiro – idalenews.com
Waxaa garoonka diyaaradaha ee Aden cadde si weyn loogu soo dhoweeyey Halyeeyo ciyaaraha fudud ee dalka,kuwaasi oo ka kala yimid dalalka Mareykanka iyo Imaaraadka carabta.
halyeeyada kasoo degey garoonka ayaa waxaa ay kala yihiin Prof.Maxamed Cali oo ah Gudoomiyaha xiriirka Ciyaaraha Fudud kaasi oo saldhigiisu yahay dalka Imaaraadka,Gudoomiyaha ururka SomaliRun Cabdi Warsame Isaaq iyo C/qaadir Caraalle Cumar oo iyaguna ka yimid dalka Mareykanka.
Madax ka tirsan Xiriirada dalka,Ciyaaryahandii hore ee Ciyaaraha fudud,Garsoorayaasha Xiriirka, Macalimiin iyo qaar katirsan ciyaartoyda ciyaaraha fudud ayaa ka qeybgaley munaasabadda lagu soo dhoweynayey bahdan Ciyaaraha Fudud ee beri samaadkii.
Marwo Khadiijo Aden dahir oo ah ku xigeenka xiriirka ayaa ka hadashey sida ay ugu faraxsanyihiin dhamaan xiriirka ciyaaraha fudud in Madaxdii iyo ciyaaryahandii hore ay dib ugu soo laabteen, iyagoo wada qorshayaal lagu hormarinayo ciyaaryahanada,garsoorayaasha iyo tababarayaasha XCF.
C/qaadir Caraalle oo ah Agaasimaha qeybta ciyaaraha fudud ee xiriirka ayaa halkaasi si weyn ugu mahadceliyey dhamaan dadkii soo dhoweeyey,isagoo intaa ku darey in ujeedada ay dalka u yimaadeen isaga iyo Cabdi Warsame ay tahay sidii aqoontii ay kasoo faaideen dibadda ugu wareejin lahaayeen bahda gudaha ee ciyaaraha fudud.
“waxan qaban doonaa seminaar ku saabsan Horumarinta tababaraasha iyo Ciyaartoyda sidoo kale Tartamo ayaanu qabaneynaa dhinaca nabadda lagu taageeraayo”ayuu raaciyey.
Cabdi warsame Isaaq iyo C/qaadir caraalle Cumar ayaa ka mid ah ururka ciyaaryahanada Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan ee SomaliRun loo yaqaan, iyagoo soo saara ciyaartoyda Soomaaliyeed ee dugsiyada dalka Mareykanka dhigta.
Ciidamada Booliska oo mudo kadib markii ugu horeysay ka howl bilaabay degmada Marko ee G/Sh/Hoose